वीर अस्पतालको ल्याब रिर्पोट घरमै बसेर हेर्न सकिने, अन्यको भन्दा ५० प्रतिशत सस्तो – Health Post Nepal
२०७८ कार्तिक ७ गते १६:२८
नेपालको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो वीर अस्पतालले थप सेवा विस्तार गरेको छ। यो सँगै बिरामीले ल्याब रिपोर्ट लिन अस्पताल धानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ। अस्पतालका प्रमुख डा. भुपेन्द्र कुमार बस्नेतका अनुसार ल्याबलाई अपग्रेड गरेर बिरामीको रिपोर्ट इमेल तथा मोबाइलमै पठाउन थालिएको छ।
‘हामीले एक हप्ता अगाडीबाट बिरामीको रिपोर्ट इमेल तथा मोबाइलमै पठाउन सुरू गरेका छौं,’ डा. बस्नेतले भने, ‘जसले गर्दा रिर्पोट लिन आउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ।’ वीरले अन्य अस्पतालको भन्दा धेरै सस्तोमा परीक्षण गर्ने गरेको छ।
‘हामीले सेवाग्राहीलाई सहज तरिकाले गुणस्तरीय सेवा दिइरहेका छौं,’ डा. बस्नेतले भने, ‘अन्य अस्पतालको भन्दा ५० प्रतिशत सस्तोमा सेवा दिएका छौं।’ वीरले नन कोभिडका साथै कोभिड सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ।
अस्पताल प्रशासनका अनुसार हाल १ हजार ५ सय हाराहारीमा ओपिडी टिकट बिक्रि हुने गरेको छ। त्यसैगरी, अस्पतालले २४ सै घण्टा पिसिआर परीक्षणको सुविधा संचालन गरेपछि नन् कोभिडका बिरामीलाई सहज हुन थालेको छ।
अस्पतालले केही समयदेखि २४ सै घण्टा पिसिआर परीक्षणको सुविधा सुचारु गरेको थियो। हाल कोरोना संक्रमितलाई भन्दा पनि परीक्षणले नन् कोभिडका बिरामीलाई उपचारमा निकै सहज बनाएको अस्पतालका डा. बस्नेतले बताए।
‘कोरोना संक्रमणको सहज परीक्षणले अकस्मिक कक्षमा आउने बिरामी, आइसियु तथा शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बिरामीलाई निकै फाइदा भएको छ,’ उनले भने। हाल वीरले एक हजारमा पिसिआर परीक्षण गर्दै आएको छ।
‘पिसिआर परीक्षणको रिर्पोट २४ घन्टाभित्र उपलब्ध हुन्छ। अन्य ल्याबको भन्दा सस्तोमा परीक्षण तथा गुणस्तरीय सेवा दिइरहेका छौं,’ डा. बस्नेत दावीका साथ भन्छन्।
त्यसैगरी, अस्पतालले फोटो र क्यूआर कोड सहितको प्रमाणपत्र दिने गरेको छ। जसले गर्दा वीरले दिएको ल्याब रिर्पोट अन्तराष्ट्रिय स्तरमा विश्वसनियता मानिन्छ।
हाल अवैध पिसिआर ल्याबको धन्दा बढिरहेको छ। त्यस्तै, अस्पतालले पोस्ट कोभिड ओपिडी तथा पोस्ट कोभिड आइसियु पनि संचालन गरेको छ।
धेरैजसो बिरामीहरु कोरोना संक्रमणपश्चात सास फेर्न गाह्रो हुने, खोकी लागिरहने, थकाई लाग्नेजस्ता लक्षण लिएर अस्पताल आउने गरेका छन्। उनीहरुका लागि ओपिडी सेवा छुट्याइएको डा. बस्नेतले बताए। दैनिक ३०–४० जना बिरामीहरु पोस्ट कोभिड उपचारका लागि ओपिडी सेवा लिने गरेका छन्।
2 thoughts on “वीर अस्पतालको ल्याब रिर्पोट घरमै बसेर हेर्न सकिने, अन्यको भन्दा ५० प्रतिशत सस्तो”
कोभिड पिसीआर को रेट सरकारी अस्पताल तथा ल्याबमा रु १००० नै हो, अन्लाईन रेपोर्ट सेवा सुरु हुनु प्रशम्सनीय छ ।
Kasari herne ni